Waa Maxay walaaca soo wajahay Jilaaga caanka ah ee Shahrukh Khan? | Aftahan News
Waa Maxay walaaca soo wajahay Jilaaga caanka ah ee Shahrukh Khan?
April 19, 2019 | Filed under: Aragtida Bulshada,Qubanaha,Wararka | Posted by: Aftahan News
India (aftahannews):- Jilaaga caanka ah ee aflaanta Hindiga, Shahrukh Khan, oo inta badan looga bartay aflaan xiiso badan oo guuleystay, sumcad badan na uu ku helay ayaa ka hadlay arrin uu sheegay inay ku keentay walaac uusan horay u arag.
Shahrukh Khan oo dhawaan dalka Ingiriiska lagu guddoonsiiyay shahaado sharafeed ayaa filimkii ugu dambeeyay ee uu sameeyay waxa uu ahaa filim loogu magacdaray Zero, kaas oo aan noqonin sidii la filayay.
JILAAGA Shahrukh Khan
Mar uu ku sugnaa dalka Shiinaha ayaa Shahrukh Khan wuxuu sheegay in filimkaasi aysan dadka jecleysan, oo uu noqday filim guul darreystay, walaac na ku abuuray isaga.
Wuxuu dalka Shiinaha u tagay si uu suuq horleh ugu raadiyo Filimka Zero oo ku fashilmay gudaha dalka Hindiya. Guul darradan ayaa filan waa ku noqotay jilaaga, maadaama uu horay usoo bandhigi jiray aflaan xiiso leh oo dhaqaale badan uu ka sameeyay.
“Dabcan waxaa laga yaabaa in aan sameeyay Filim aan sheekadiisa la jecleysanin, waxaan ka walaac sanahay in uu suuq ka heli doono Shiinaha, balse waxaan rajeynayaa inay shacabka Shiinaha ka helaan”, ayuu yidhi Shahrukh Khan oo wareysi siinayay telefishinka dowladda Shiinaha.
Sameynta Filimkan oo uu Shahrukh Khan sheegay in uu ku baxay qarash badan ayaa waxaa isku howshay shirkadda Redchilles ee uu isagu leeyahay. “Wakhti badan ayaannu galinay sameynta filimkan, aad ayaan uga walwalay oo waxaan gaaray heer aan mardambe dib u daawanin Filimka, marka Filim saddex sano aad sameneysay ay dadku iska diidaan aad ayaad uga murugoneysaa, balse saddex bilood kadib ayaan dib uu eegi doonaa”, ayuu hadalkiisa raaciyay Shahrukh Khan.
Inkastoo aan la ogayn waxa sababay guul darrada filimkan ayaa haddana waxay dad badan qabaan in filimka uusan ahayn mid u xiiso badan sida aflaamtii hore ee looga bartay Khan, waxaan jilista filimkan ku wehliyay atirishooyinka kala ah Anushka Sharmaa iyo Katrina Kaif.
Filimka Zero oo ilaa iyo iminka soo xareeyay lacag dhan 16 milyan oo doolar aya ah mid jilaaga uu ku matalayo nin aad u gaaban, balse wax jeclaaday, waxaana qoraaga Filimkan oo lagu magacaabo Anjum Rajabali uu sheegay in guul darrada Zero ay saameysay hamiga Shahrukh Khan uu u hayay in uu smaeeyo filimo kale.
Shahrukh Khan oo sidoo kale loo yaqaano “Boqor Khan” ayaa caan ku ah jilista aflaanta Hindiga ee qisooyinka jaceylka ku saleysan, waxaana kamid ah Filimkii caan baxay ee Kuch Kuch Hota Hai, Jab Tak Hai Jaan, Baazigaar iyo kuwa kale oo badan.
Lama oga saameynta ay guul darrada filimka Zero uu ku yeelan doonto mustaqbalka jilliin ee Shahrukh Khan oo sanad walba soo saara filimo kala duwan.